Iindaba - I-M3 CAP MOLD AMAVA
Amava e-M3 CAP MOLD
Siye saqokelela inqanaba eliphezulu kakhulu kwaye liphezulu lemoto eshushu yembaleki ekwenziweni komngundo eChin.
Idatha yeemveliso zomhlaba ezigobile ifundwa yi-CMM ukuqinisekisa ukuchaneka kwedatha kunye nokuchaneka kweemveliso zesikhunta.
Ukujikeleza kwamanzi kongezwe kwinxalenye yomsonto wokwenza, ukuze umsonto ungabi lula ukugqwesa emva kokwenza.
Umsonto wentambo wenziwa ngokusila, kwaye umsonto owenziwe mhle kwaye womelele, kwaye umbala uqaqambile. Njengokuba icandelo lomsonto likhazimlisiwe ngesipili, ukuqaqamba kwemveliso eyenziwayo kuyafana.
Imingxunya yokubumba kunye ne-cores kunye nezinye izinto ezibalulekileyo ziqhubekeka zibe ngamalungu azimeleyo. Emva kokugqitywa kwemingxunya kugqityiwe, kufakwa umbungu weDie. Akunakulungeleka kuphela ukulungisa isikhunta, kodwa kunokulungisa isikhunta xa ufaka kumatshini, iimveliso ezenziwe ngumbumba aziyi kuphazamiseka. Ukuqhubeka kwemveliso kubonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokusebenzisa ngokupheleleyo ukungunda ukugqiba iodolo
Sebenzisa izixhobo zokugaya zangaphakathi nangaphandle ukuqhubekekisa isiseko esingaphambili kunye nomqolo ongasemva wokubumba, ukulawula ngokungqongqo umgangatho kwinkqubo yokuqhubekeka, ulinganisa ngokuthe rhoqo itafile, kwaye impazamo yokuchaneka ayikho ngaphezulu kwe-0.02mm.
Umsonto wangaphakathi webhotile yeplastiki yenziwa yinyani enzulu yokwenza kunye nenaliti yenaliti yaphathwa kwibhotile yebhotile.
Ukulungelelaniswa okufanelekileyo kokujikeleza kwamanzi kwintambo yomzimba kunye ne-high-grade thread cap mold kunganciphisa ixesha lokujikeleza kwemveliso, ukuphucula ukusebenza kwemveliso kunye nokwenza umsonto onqabileyo ungabi lula ukukhubazeka.
Isitya somlomo sokubumba songezwa ngentloko yenkxaso ukwenzela ukuba ukufa kungakhubazeki emva kokungqubana ekusebenzeni ixesha elide.
Ukukhethwa kwezinto eziphezulu ezikhanyayo nezikhanyayo kufuneka zihambelane nokukhethwa kwezinto zokubumba. Ukuncipha kwesikhongozeli esigqibeleleyo kunye nokulingana ngexesha lendibano kufanele ukuba kube nakho, kunye namava kunye neziphakamiso ngaphambi kokuba kwenziwe imveliso yokubumba.
Isiseko sokubumba sigqityiwe, kwaye ubomi bokufa buphezulu kwizigidi zamaxesha, ezinokunciphisa ngempumelelo indleko zemveliso.
Sinikela ingqalelo enkulu ekusetyenzisweni kwenkqubo yokujikeleza kwamanzi okupholisa kwimveliso yokubumba, enokulawula ngokufanelekileyo umjikelo wokubumba, ukuphucula ukusebenza kwemveliso kunye nokunciphisa iindleko.